Anjozorobe - Wikipedia
18°24′00″S 47°52′00″E﻿ / ﻿18.400000°S 47.866670°E﻿ / -18.400000; 47.866670
Isam-ponina 19 192 mponina
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 25-50%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia tabac. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia pomme de terre. Ny isan'omby dia 4521. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 90 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 2 no isan'ny ombivavy be ronono. 80 ny mponina no miasa tany. 20 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 1353 no isan'ny kisoa.
Misy masoivohon'ny banky. Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana hopitaly na toeram-pitsaboana ao. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Misy fianarana ambaratonga faharoa (lise). Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao. Ny fokontany 24 dia misy fotodrafitran'ny Rano fisotro madio avokoa, misy toerana fidiovana avokoa ny akamaroan'ny EPP isam-pokontany Tsy misy intsony EPP mitafo bozaka mba ialana amin'ny loza mety ateraky ny doro tanety Misy Birao iombonan'ny Fananantany Ratsy avokoa ny lalana mampitohy amin'ireo Kaominina manodidina sy ny fokontany
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 2 ora. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 2 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 7000 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 7000 Fmg.
35 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 4 volana. 5 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 60 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiompiana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiompiana. Misy sampandraharaha misahana ny fananan-tany ao. Misy sampandraharaha misahana ny fananan-tany ao. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny rano sy ny ala. Misy masoivohon'ny ministeran'ny rano sy ny ala. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny mponina. Misy masoivohon'ny ministeran'ny mponina. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa vaventy. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa vaventy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Anjozorobe&oldid=966464"
Voaova farany tamin'ny 21 Febroary 2019 amin'ny 18:42 ity pejy ity.